Ikhabethe labangu-4 endaweni ethule yeLake Chelenko - I-Airbnb
Ikhabethe labangu-4 endaweni ethule yeLake Chelenko
E-Bahía Catalina sifuna ukuziguqula sibe indawo yokuhlangana nokufunda ePatagonia, ogwini lwe-General Carrera / Chelenko Lake, lapho izinqubo zokusimama zihlangana khona, esimweni samandla asekelwe emphakathini kanye nokuzimela kokudla, nomnotho omncane. .
Emakhabetheni ethu nasezindaweni ezisizungezile, sifuna ukuthi isivakashi siphile ngendlela ehlobene nemvelo kanye nendawo yasemaphandleni enempilo, sibuyise isiko nesiko lokuhlala emaphandleni.
Le khabhini iyigumbi elinezikhala ezimbili (ehlukaniswe ikhethini eliqengqelekayo phezulu naphansi), elinegumbi lokuhlala, umbhede wabantu ababili kanye nombhede oyibhinki (kanye negumbi lokugezela).
Indawo enokuthula imvelo ekunikezayo, entshonalanga yePatagonia
ICatalina Bay itholakala ku-Austral Longitudinal Road (Carretera Austral) cishe amahora amahlanu eningizimu yeCoyhaique, ogwini lweLake General Carrera. Lokhu kucishe kube amakhilomitha amathathu eningizimu yechibi, amakhilomitha amathathu ngaphambi kokuwelela ePuerto Guadal.
Kuyinsimu engaba amahektha angama-40, enhlonhlweni. Kunempophoma, amahlathi e-coigüe, ama-ñires, amabhishi amahlanu kanye nomkhakha wemizila ongahlolwa. Sine-kayak emibili engasetshenziswa izivakashi, ngaphezu kokudoba ogwini. Yiqiniso, alukho ucingo noma isignali ye-inthanethi, ishiya iPuerto Guadal imizuzu engu-15 ngemoto lapho lezi zinsizakalo zitholakala khona. Kukhona ukudoba emkhakheni (kokubili enhlonhlweni yensimu yethu nasezindaweni ezizungezile), okungenziwa ogwini noma ogwini.
Yebo, ababungazi bahlala ezweni kwelinye lamakhabethe.